搜索 anuloma 的结果：
anuloma：a. [anu-loma] 順的，隨順的. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆.
anuloma：a. [anu-loma] 順の，随順の. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆.
anuloma：a. [anu-loma] 順の，随順の.-gotrabhū随顺种姓.-ñāṇa随顺智. -paccanīya 順逆. -paṭiloma 順逆
Anuloma，【形】 规则的，不敌对的；【阳】 适合。 anulomika，【形】适当的，顺序的。（p21）
Anuloma，【形】规则的，不敌对的，随顺的；【阳】适合。anulomika，【形】适当的，顺序的。anulomikāya khantiyā samannāgato，成就随顺忍。anulomapaṭiloma 顺逆。anulomikaṁ khantiṁ（anulomikakhantiṁ﹐anulomikā vā khantī”ti）﹐随顺忍；PṭsA.CS：p.2.7.：Anulomikāti lokuttaradhammānaṁ anulomato anulomikā. Khantīti ñāṇaṁ.（随顺：随顺出间诸法的随顺。忍：智。）
[anu+loma. anuloma. （nāma）+a. （anulometi-）. lomāni anugataṃ anulomaṃ，yathā sesalomāni anugataṃ lomaṃ tadanukūlattā ]]anuloma]]nti vuccatipi，tathā taṃjātiyakaṃ yesaṃ kesañci anukūlaṃ sabbampi ruḷhīvasena ]]anuloma]]nti vuccati. tameva anulomikaṃ，anukūlanti attho. khuddasikkhā，ṭī，.271. rūḷhīsaddo tvayaṃ （tulyasaddo） sadisapariyāyo. yathā-pavīṇaç kusalaç patilomaç anulomā ityavayavatthābhāvo，evaṃ tulyasaddepi. mahābhāssappadīpa.1，1.9.]
[အနု+လောမ။ အနုလောမ။ （နာမဓာတ်）+အ။ （အနုလောမေတိ-ကြည့်）။ လောမာနိ အနုဂတံ အနုလောမံ၊ ယထာ သေသလောမာနိ အနုဂတံ လောမံ တဒနုကူလတ္တာ ＇＇အနုလောမ＇＇န္တိ ဝုစ္စတိပိ၊ တထာ တံဇာတိယကံ ယေသံ ကေသဉ္စိ အနုကူလံ သဗ္ဗမ္ပိ ရုဠှီဝသေန ＇＇အနုလောမ＇＇န္တိ ဝုစ္စတိ။ တမေဝ အနုလောမိကံ၊ အနုကူလန္တိ အတ္ထော။ ခုဒ္ဒသိက္ခာ၊ဋီ၊သစ်။၂၇၁။ ရူဠှီသဒ္ဒေါ တွယံ （တုလျသဒ္ဒေါ） သဒိသပရိယာယော။ ယထာ-ပဝီဏ，ကုသလ，ပတိလောမ，အနုလောမာ ဣတျဝယဝတ္ထာဘာဝေါ၊ ဧဝံ တုလျသဒ္ဒေပိ။ မဟာဘာဿပ္ပဒီပ။၁၊၁။၉။]
anuloma：[adj.] regular； not antagonistic. m. conformity.
Anuloma，（adj.） [Sk. anu + loma] “with the hair or grain”，i. e. in natural order，suitable，fit，adapted to，adaptable，straight forward D.II，273 （anānuloma，q. v.） S.IV，401； Ps.II，67，70； DhA.II，208. -- nt. direct order，state of fitting in，adaptation Miln.148.
--ñāṇa insight of adaptation （cp. Cpd. 66，68） DhA.II，208. --paṭiloma in regular order & reversed，forward & backward （Ep. of paṭiccasamuppāda，also in BSk.） Vin.I，1； A.IV，448. （Page 42）
ANULOMA：[a] điều hòa，không trái ngược [m] đúng theo --mika [a] thuận tiện，đúng theo thứ lớp
Anuloma：thuận thứ thuận tùng，tâm thuận thứ
（၁） လျော်-လျောက်ပတ်-သော၊ မဆန့်ကျင်သော၊ ကိုက်ညီသော။ （၂） （က） အလျော်၊ လျော်-လျောက်ပတ်-သော အရာ၊ အနုလုံ။ （ခ） လျော်သော-အလားတူသော-ပါရာဇိကအာပတ်။ （ဂ） ဝိဘင်း，ခန္ဓကတို့အား လျော်သော ပါဠိ၊ ပရိဝါရပါဠိ။ （ဃ） ပစ္စည်းတရားတို့အား လျော်သည်၏ အစွမ်းအားဖြင့် ဟောအပ်သော-အနုလောမ-ပဋ္ဌာန်းကျမ်း။ （င） လျော်သော တည်ရာ၊ လျော်သောအကြောင်း။ （စ） လျောက်ပတ်-ထိုက်တန်-သော အသုံးအဆောင်အရာဝတ္ထုစသည်။ （ဆ） အလျော်ဖြစ်သော-မိမိပြုသင့်သော ကိစ္စကို ပြုသော-အဝိဇ္ဇာစသော အကြောင်းတရား၊ သံသရာဝဋ်ဖြစ်ခြင်းအားလျော်သော အဝိဇ္ဇာစသော အကြောင်းတရား။ （ဇ） ဝါဒအားလျော်သော-အနုလောမ-အဆို။ အနုလောမဋ္ဌပနာ，အနုလောမရောပနာ-တို့လည်းကြည့်။ （ဈ） လျော်သော စိတ်၊ ရှေးနောက်တရားတို့အားလျော်သောစိတ်၊ အနုလုံဇောစိတ်။ အနုလောမဉာဏ-လည်းကြည့်။ （၃） အစဉ်၊ အစမှ အဆုံး၊ အနုလုံ။ ပဋိလောမ-လည်းကြည့်။
အစမှအဆုံးတိုင် လျော်သောအစဉ်။ အနုလုံ။
အနုလောမံ၊ လျော်စွာ။ အနုလောမေန၊ အစဉ်အတိုင်းဖြင့်။ အနုလုံဖြင့်။ အနုလောမတော၊ အစဉ်အတိုင်းဖြင့်။
လျော်သည်။ လျောက်ပတ်သည်။ အစမှအဆုံးတိုင် အစဉ်အလျောက်ဖြစ်သည်။
与 anuloma 相似的巴利词：